लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनमा दरखास्त नै परेन !::Hamrodamak.com
लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनमा दरखास्त नै परेन !
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगको एक सय बढी प्राविधिक पदमा दरखास्त नै पर्न सकेको छैन । गत वर्ष कूल खुलाईएको विज्ञापनमध्ये १०१ विज्ञापनमा दरखास्त नपरेको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार दरखास्त नपरेका विज्ञापनमध्ये ६५ आन्तरिक प्रतियोगिता अन्तर्गतको छ । एक खुला प्रतियोगिता र ३५ समावेशी प्रतियोगिताका विज्ञापन छन् ।
अधिकांश प्राविधिक तहका विज्ञापनमा दरखास्त नपरेको आयोगले जनाएको छ । जसमा अधिकांश स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका विज्ञापनमा दरखास्त परेका छैनन् ।
आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीका अनुसार शिक्षाशास्त्र पढेकाबाट आएको दरखास्तले भने मान्यता नपाउँदा खाली हुन गएको हो । उक्त विषय भारतमा पढाइ हुन्छ । नेपालमा शिक्षा सङ्कायतर्फ स्वास्थ्यको पढाइ हुने गरे पनि मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा ऐनले मान्यता नदिएकाले दरखास्त नपरेकामध्ये ५८ विज्ञापन स्वास्थ्य क्षेत्रका छन् । अधिकांश माथिल्लो तहमा खाली छ ।
केही इञ्जिनियर, टाइपिष्ट, अमिन, अपरेटर, पशु स्वास्थ्यलगायत पदका विज्ञापन खाली रहे । चिकित्सक क्षेत्रका नवौं र एघारौं तहका बढी छन् । आयोगको केन्द्रीय कार्यालय अन्तर्गतका ६८ विज्ञापन र धनकुटा, हेटौंडा, पोखरा र जुम्ला कार्यालयका तीन तीन विज्ञापनमा दरखास्त परेन ।